वाग्मती प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसद वैद्यले दिए प्रधानमन्त्रीलाई 'धम्की', कडा कारबाही गर्न माग
बाह्रखरी - शनिबार, जेठ २९, २०७८
काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका कांग्रेस सांसद् नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आफू नाथुराम गोड्से बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा उनले आफू प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध नाथुराम गोड्से बन्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
नाथुराम गोड्सेले महात्मा गान्धीको हत्या गरेका थिए ।
“प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउन जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ, यो समयमा यदि खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने देशै खाइदिन्छ है ! त्यसैले मेरो आग्रह यो देश बचाउन नाथुराम गोड्से आवश्यक पर्‍यो । कोही थाथुराम गोड्से बन्न तयार छैन भने मै बन्दिन्छु,” वैद्यले भने ।
उनले नागरिकताको विषयमा सरकारमा बसेपछि ‘लम्पसारवाद’ बन्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । प्रधानमन्त्री विरुद्ध वैद्यको अभिव्यक्तिको नेताहरूले आलोचना गर्दै कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
एमालेका खनाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले माफी माग्न आग्रह गरेका छन् ।
“वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तमजीले दशवटा तर्क नगरि खुरुक्क माफ माग्नु नै बेस हुन्छ,” उनले भनेका छन् ।
त्यस्तै एमालेका नेता महेश वस्नेतले उनलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
“माहात्मा गान्धीलाई जस्तै प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई मार्ने षडयन्त्र कांग्रेसले बनाएको हो त ? गान्धीका हत्यारा नाथुराम गोडसे बन्न तयार छु भनेर कांग्रेसको नरोत्तम वैद्यले प्रदेश सभामा खुल्लम खुल्ला बोलिरहेका छन् । यो मान्छेलाई तुरुन्त पक्राउ गरेर सरकारले कारबाही गर्नु पर्दछ,” उनले भनेका छन् ।
साधारणतया कुनै पनि पूर्वराष्ट्रपतिले देशको कार्यकारीको काममा टिप्पणी गर्नु शोभनीय मानिँदैन । देशको इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोडमा प्रथम राष्ट्रपतिको रुपमा... ९ मिनेट पहिले